Madaxda Hirshabeele oo laga dalbaday dhismaha waddooyinka burbursan | HEEGAN
Madaxda Hirshabeele oo laga dalbaday dhismaha waddooyinka burbursan
Hogaanka maamulka cusub ee maamulka Hirshabeelle ayaa laga dalbaday iney ku dadaalaan sidii ay u dhisi lahaayeen waddooyinka burbursan ee ku yaala deegaanada maamulkaasi uu ka taliyo ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe.
Siyaasiyiin iyo masuuliyiin kasoo jeeda Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa ugu baaqay madaxweynaha iyo ku xigeenka HirShabeele iney dadaal dheeri ah ku bixiyaan sidii loo dhisi lahaa waddada isku xirta Muqdisho ilaa degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha arimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Cismaan Cali, ayaa sheegay in waajib ay tahay madaxda maamulka HirShabeele iney dhisaan wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar maadaama Jowhar tahay caasimada maamulkaasi, kadibna loo gudbaa wadada isku xirta Jowhar ilaa Beledweyne.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax oo isna saxaafada la hadlay ayaa sheegay in hogaanka maamulka HirShabeele ay qabteen shaqsiyaad si weyn loo doonayay waxna ka qaban kara xaaladaha ka jira deegaanada HirShabeele.
Siyaasiyiin kale ayaa usoo jeediyay madaxda maamulka HirShabeele iney ka shaqeeyaan adkeynta amaanka deegaanada maamulkaasi oo meelaha qaar ku sugan yihiin Alshabaab.
Isniintii lasoo dhaafay ayaa magaalada Jowhar waxaa madaxweyne iyo ku xigeen loogu doortay Cali Cabdulaahi Cosoble iyo Cali Cabdulaahi Xuseen “Guudlaawe”.